February 2021 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Feb 28, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 17-07–1442…
Sida ay shaaciyeen mas’uuliyiinta dowladda Mexico 11 ruux ayaa ku dhintay 2 qof oo kalana way ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay waddanka Mexico ee dhaca Qaaradda Waqooyiga Ameerica. Weerarka ayaa si…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Axad, Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 16-07-1442, oo waafaqsan 28-02-2021, Warka Duhurnimo waxaa soo jeediyay…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa Axad, Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 16-07-1442, oo waafaqsan 28-02-2021, Warka subaxnimo waxaa soo jeediyay …
guuleed	 Feb 27, 2021 0
Dhageystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Dhagayso Dhuuxa waraysiyada, Taariikhda hijriguna…
In ka Badan 20 Ruux Oo ku Dhimatay Iska Hor Imaadyo ka Dhacay Gudaha Mid ka Mid ah Xabsiyada Dalka…
Ugu yaraan 25 Maxbuus ayaa dhintay kadib markii toogasho ay ku dileen ilaalada xabsiga xili ay isku dayayeen in ay ka baxsadaan xabsi ku yaala meel u dhow caasimada waddanka Haiti sida ay ku dhawaaqeen mus’uuliyiinta waddankaas. Dadka…
Waxaad halkaan kala socon kartaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacada islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta waa sabti, Taariikhda hijriguna Waxay ku beegan tahay 15-07-1442, oo waafaqsan 27-02-2021, Warka subaxnimo waxaa soo jeediyay…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 14-07-1442.
guuleed	 Feb 26, 2021 0
Qof looga shakisanyahay inuu 3 ruux ku dilaya gobolka Okalahoma ee dhaca koonfurta wadanka Maraykanka ayaa qirtay inuu jarjaray wadnaha mid kamid ah dadka uu dilay, islamarkaana uu ku kariyay bardho, sida ay tabinayaan warbaahinta…
Dhagayso Diirada oo si qoto dheer looga hadlay gunta khilaafka Dowladda iyo Mucaaradkeeda.
Diirada ayaa maanta oo jimco ah 14 07 2021 waxaa si qoto dheer looga hadlay gunta khilaafka Dowladda federaalka, maamul goballeedyada, iyo Mucaaradkeeda,waxaana marti ku ahaa Maxamuud Ugaas oo ah Aqoonyahan la socda Arrimaha Soomaaliya.*…